Raspberry Pi Zero 2 W: nke ọhụrụ sitere na Raspberry Pi | Ngwaike efu
Isaac | 28/10/2021 11:54 | Ntu Pi
Ọ bụ afọ 6 kemgbe mmalite nke Raspberry Pi Zero, a bọọdụ SBC Ọ dị obere $ 5 (na ụdị W bụ $ 10) ma bụrụ nnukwu nhọrọ maka ọtụtụ ndị na-eme ihe chọrọ ihe pere mpe karịa ụdị Pi nkịtị. Iji gaa n'ihu na-akwado ụzọ ndị ọrụ niile chọrọ uru nke bọọdụ a, ha amalitela ugbu a Raspberry Pi Zero 2W ọhụrụ, bọọdụ nke na-efu ihe dị ka $15 ma jikọta teknụzụ ikuku.
A na-eji efere ndị a eme ihe ọtụtụ ọrụ N'onwe GịSite na ụfọdụ ngwa ụlọ mara mma, ruo ndị ọkà okwu maara ihe, na ọbụna ndị na-akwado ụlọ ọgwụ nke ndị na-eme ihe mepụtara n'oge ọrịa a. Ugbu a ị nwere ike ịga n'ihu ịgbatị ngwa nke bọọdụ ndị a site na ike na ozi na mmelite ahụ na-ewetara gị ...
1 Kedu ihe bụ Raspberry Pi Zero 2W?
2 Raspberry Pi Zero 2W: nkọwa teknụzụ
Kedu ihe bụ Raspberry Pi Zero 2W?
Dị ka bọọdụ Raspberry ndị ọzọ, ọ bụ SBC (Single Board Kọmputa), ya bụ, kọmpụta dị ọnụ ala etinyere na obere bọọdụ. Ụdị Raspberry Pi Zero 2W na-efu ihe dịka $15, ọnụ ala dị ọnụ ala maka ihe niile ị nwere ike inye onwe gị.
Ma ngwaike, ọ na-abịa onwem na otu Boradcom BCM2710A1 SoC nke nwere Raspberry Pi 3, nwere cores dabere na Arm na nke nwere ike iru ọsọ 1Ghz. Na mgbakwunye, ọ gụnyekwara ikike LPDDR2 ụdị SDRAM nke 512 MB. Mmụba arụmọrụ dị ukwuu maka ibu ọrụ buru ibu. N'ezie, ụdị a ejirila 5 karịa nke bu ya ụzọ.
Na mgbakwunye, osisi ahụ nwere usoro ọzọ ntinye na mmepụta ihe, dị ka oghere microSD ya nke na-arụ ọrụ dị ka ebe nchekwa yana maka sistemụ arụmọrụ, ọdụ ụgbọ mmiri USB ya, wdg, nke ị nwere ike ijikọ akụkụ ndị ọzọ, dị ka keyboard na òké, na ihuenyo iji wuchaa kọmputa gị.
Raspberry Pi Zero 2W: nkọwa teknụzụ
N'ime obere Raspberry Pi Zero W ọtụtụ ihe ịtụnanya zoro ezo. Nke Nka na ụzụ nkọwa kacha mara amara bụ:
Broadcom BCM2710A1 SoC, nwere cores ARM anọ nke ụdị 64-bit Cortex-A53 na 1 Ghz.
512 MB nke LPDDR2 Ram.
IEEE 802.11b / g / n modul Njikọ ikuku maka 2.4Ghz WiFi na Bluetooth 4.2, BLE.
1 x USB 2.0 ọdụ ụgbọ mmiri nwere OTG.
Dakọtara na okpu 40-pin.
MicroSD oghere kaadị ebe nchekwa.
Obere HDMI ọdụ ụgbọ mmiri.
Vidiyo jikọtara ọnụ na ntọgharị ntụtụ rere.
CSI-2 maka njikọ kamera weebụ.
Dakọtara na codecs: deco H.264, MPEG-4 (ruo 1080p na 30 FPS) na enco H.264 (ruo 1080p na 30 FPS).
Nkwado maka OpenGL ES 1.1 eserese API. na 2.0
Ọ nwere ike na-arụ ọtụtụ sistemụ arụmọrụ Raspberry Pi dakọtara.
N'aka nke ọzọ, ihe ọzọ dị egwu ọhụrụ nke SoC, ya bụ, nke etiti mgbawa nke Raspberry Pi Zero 2 W, bụ na ọ na-eji. Nkwakọ ngwaahịa 3D, ya bụ, na-kpakọrọ akpa. Nke a na-enweta ngwugwu nwere teknụzụ PoP (Package on Package) nke mgbawa SDRAM dị n'elu mgbawa nke mgbawa nhazi, na-enweta SiP (System-in-Package). Na nkenke, obere mgbawa na nha, ma na ọtụtụ n'ime ... N'ụzọ dị mwute, ọ ka ga-abụ ihe ịma aka itinye 1 GB na ngwugwu ahụ, n'ihi ya, a gaghị enwe ụdị nwere 1GB nke RAM.
N'aka nke ọzọ, ihe ọzọ na-adọrọ mmasị banyere Raspberry Pi Zero 2 W bụ PSU gị, ya bụ, ọkụ ọkụ gị. Maka nke a, ewepụtala ihe nkwụnye ọkụ USB ọhụrụ gọọmentị. Ọ bụ ihe nkwụnye ọkụ Raspberry Pi 4 emegharịrị, yana njikọ USB micro-B kama nke USB-C, yana ịnwe obere ugbu a ka ọ bụrụ 2.5A.
Nke a nkwụnye nwere ọnụ ahịa ihe dịka $ 8 ma zụtara onwe ya. Enwere ụdị dị iche iche, iji mee mgbanwe na European, American, British, Chinese plugs, wdg.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị na-eche banyere nnweta nke Raspberry Pi Zero 2 W, ọ dị ugbu a na European Union, United Kingdom, United States, Canada na Hong Kong. N'oge na-adịghị anya a ga-agbakwunye mba ndị ọzọ dịka Australia na New Zealand nke ga-abata na Nọvemba ...
Raspberry Pi Foundation n'onwe ya ekwupụtala na ngwaahịa a enweghị ike ụkọ semiconductor zuru ụwa ọnụ, yabụ na agaghị enwe nkeji ole dị. A na-eme atụmatụ ịmalite ihe dị ka nkeji 200.000 n'afọ a, yana n'ọdịnihu 250.000 ọzọ n'etiti 2022.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Raspberry Pi Zero 2W: nke kachasị ọhụrụ sitere na Raspberry Pi